Mampiasà jQuery hanamboarana pejy Internet mahazatra | Martech Zone
Mampiasà jQuery hanamboarana pejy Internet mahazatra
Alarobia, Martsa 18, 2009 Alahady 17 Febroary 2013 Douglas Karr
jQuery ihany no nanao ny tetika.
Mikaroha saika saika ny jQuery +, ary ho hitanao ihany koa fa nanamboatra vahaolana ireo developer, antsoina hoe plugins, vonona ny handeha! Amin'ity tranga ity dia nitady ny "jQuery carousel" aho ary nahita zavatra mahafinaritra sy feno Vahaolana carousel jQuery amin'ny Dynamic Drive.
Ny zavatra tsara iray hafa momba ny jQuery dia izy kaody nampiantranoin'i Google ankehitriny. Vokatr'izany dia tsy mila mampakatra jQuery amin'ny mpizara anao ianao, ary tsy mila mamaky azy isaky ny mandeha ny mpamaky ny tranonkalanao. Raha efa nandeha tamina tranonkala iray niaraka tamin'ny jQuery izy ireo, dia cache ho azy avy hatrany hampiasaina amin'ny tranokalanao!
Ampio fotsiny ny kaody ao anaty tag anao ary miala ianao ary mihazakazaka miaraka amin'ny jQuery:
Mba hampandehanana ny carousel dia tsy maintsy nampakatra sy nanondro ny script stepcarousel aho:
Aorian'izay, tsotra ny nanova ny pejy! Napetrako tao anatin'ny div antsoina hoe ny carousel-ko mygallery ary ny soritr'i tontonana ao anaty div antsoina fehin-kibo. Avy eo dia nasiako fehezan-kaonty kely tao anaty vatako.
Azonao atao ny manamboatra kely ny hetsika. Amin'ity tranga ity dia novaiko ny script mba hihazakazaka ho azy rehefa mavesatra ny pejy. Namboariko ny hafainganam-pandeha sy ny faharetan'ny izay aseho ny takelaka tsirairay, ary koa ny bokotra ahodin-tanana ireo takelaka havia sy havanana. Endri-javatra mahafinaritra iray hafa amin'ity plugin ity - rehefa tonga amin'ny tontonana farany ianao dia famerenana miverina amin'ny voalohany!
Douglas Karr Wednesday, March 18, 2009 Sunday, February 17, 2013
Skip The resume and the Job Fair
Fanontaniana dimy hanombanana ny varotrao sy ny lamin'ny varotrao
Mar 20, 2009 amin'ny 11: 39 AM
Manangana ny tranokalako aho izao ary mikasa ny hanomboka amin'ity faran'ny herinandro ity raha toa ka mandeha tsara ny zava-drehetra. Mampiasa jQuery aho amin'ny lafiny vitsivitsy amin'izany ary tsy mbola misy fitarainana hatreto. Toa manome ny fahatsapana ny "web 2.0" ny zava-drehetra ary manantena aho fa hanome voninahitra ny tranonkala vita fotsiny izany.